Akhriso:- Wararkii Ugu Dambeeyay Shirka Dib U Heshiisiinta Galmudug
Tuesday August 13, 2019 - 12:42:37 in Wararka by Mogadishu Times
Magalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug waxa kulan ku yeeshay Guddiga qaban qaabada Shirka dib u heshisiinta Galmudug iyaga oo soo bandhigay habraaca la xiriira qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta. Guddiga ayaa shirkjooda ka soo saar
Magalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug waxa kulan ku yeeshay Guddiga qaban qaabada Shirka dib u heshisiinta Galmudug iyaga oo soo bandhigay habraaca la xiriira qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta. Guddiga ayaa shirkjooda ka soo saaray Shan qodob oo uu ku furmo karo shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo la qorsheeyay in uu dhaco 17-ka Bishaan waxaana qodobadaas ka mid ahaa. 1 Bilawga soo dhaweynta iyo Qaabilaadda Ergooyinka ka qeyb-galayaasha Shirka. 2 Hubinta iyo Kormeeridda Goobaha Shirka iyo Deegaanka Ergooyinka.
3 Diyaarinta Ajandaha iyo Agabyada Shirka.
4 War-gelinta iyo Diyaar-garowga Hay’adaha Amniga iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka.
5 Xadeynta Waqtiga soo gaaridda Ergooyinka Goobta Shirka oo ah: 14 – 16 Bishaan iyo Furitaanka Shirka oo ah: 17 ka Bishaan.
Magaalada Dhuusa-mareeb waxaa laga dareemayaa qaban-qaabadii ugu dambeysay ee shirka shirka dib u heshiisiinta xubnaha guddiga ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa ay booqasho ku tageen deegaano ka tirsan gobolada Mudug iyo Gal-gaduud iyaga oo kula kulmay Odayaasha dhqanka oo laf dhabar u ah shirkaas.